Ndị na-ere ngwaahịa na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụgbọ ala Hydraulic Organic Waste | YiZheng
Gịnị bụ Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine?
Na Hydraulic Organic Waste Composting Turner igwe na-amịkọrọ uru dị na teknụzụ nrụpụta dị elu n'ụlọ na mba ofesi. Ọ na-eji usoro nyocha nke teknụzụ teknụzụ dị elu eme ihe n'ụzọ zuru oke. Akụrụngwa na-ejikọ teknụzụ igwe, eletriki na hydraulic. Mgbe ọ na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na ikuku oxygenating, ọ nwekwara ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke ihe ndị na-emepụta ihe iji mee ka ihe ndị na-emepụta ihe na-eto ngwa ngwa, nke nwere ike ịchọta ihe ndị a chọrọ maka ịmepụta fatịlaịza buru ibu nke fatịlaịza organic.
Hydraulic Lifting Composting Turner Njirimara
1) Adabara tụgharịa na gbaa ụka nke organic n'efu, dị ka, sludge n'efu, sugar nkume igwe nri nyo apịtị, ọjọọ slag achicha na ahịhịa sawdust.
2) A na-ejikarị ya eme ihe na nsị na-eme ka mmiri sie ike ma wepụ mwepụ nke mmiri nke fatịlaịza, fatịlaịza, sludge dumps, hotikoisho na ụlọ ọrụ na-emepụta ero.
3) Enwere ike iji ya gbaa ụka, tankị gbaa ụka na igwe mkpanaka, wdg. Igwe akụrụngwa nwere ike ịmatakwu igwe eji arụ ọrụ.
4) Fermented na ihe nkwado ya nwekwara ike ịbụ nkwụsị na-aga n'ihu.
5) arụmọrụ, ezigbo ọrụ, ike na inogide, ọbụna ịtụfu otutu.
6) Centralized akara kabinet, nwere ike nweta akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ akpaka akara ọrụ
7) Kwadebere ya na soft Starter, mmalite-elu mmetụta ibu dị ala
8) Kwadebere ya na sistemụ na-ebuli elu nke hydraulic.
9) itgba mmachi njem, kpọọ ọrụ nke nchekwa ma ịgba.
Raulickpụrụ Ọrụ Ngwunye Hydraulic
Isi osisi nke Hydraulic na-ebuli composting Turner nakweere ogwe osisi dị ogologo nke nwere aka ekpe na aka nri na obere oghere dị elu, nke mere na igwe ahụ nwere ike gbanwee ihe ahụ, nwere ezigbo ikuku gas, ọnụ ọgụgụ dị elu na nkwụsị dị ala. Nnyefe akụkụ adopts a nnukwu pitch yinye mbanye, nke na-eme ka ike arụmọrụ elu, mkpọtụ dị ala, ọrụ ahụ kwụsiri ike, ihe mmịfe ahụ adịghị amị amị. Dị ahụ ejiri akara zuru oke, nchekwa ma nwee ntụkwasị obi. A na-ejikwa ngwa ahụ ejiri otu igbe rụọ ọrụ nke ọma, na-eme ka ọ dị mfe ma dịkwa mma ịrụ ọrụ.
Hydraulic Lifting Composting Turner Video Ngosipụta
Nhọrọ Ntugharị Hydraulic Haịlị
Ije ije Speed ​​(m / min)
Nke gara aga: Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Isi
Osote: Kwụrụ tankị